बाप्पेको रियलबाट खेल्ने सपना कसरी तुहियो ? | Hamro Khelkud
बाप्पेको रियलबाट खेल्ने सपना कसरी तुहियो ?
म्याड्रिड (एजेन्सी) – यो सिजन युरोपको सुरुवा बजारमा फ्रान्सेली युवा खेलाडी सबैको चासोको विषय बने । बार्सिलोना,रियल म्याड्रिड,लिभरपुल,आर्सनल लगायतका धेरै ठूला क्लबको नजरमा रहेका १८ वर्षे किलियन बाप्पे अन्ततः फ्रान्सेली महारथी पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) सँग आबद्ध भएका छन् ।
यसै सिजन २ सय २२ मिलियन युरोमा नेयमारलाई भित्राएपछि ‘फाइनान्सियल फेयर प्ले’लाई मद्धेनजर गर्दै पिएसजीले अर्को वर्ष स्थायी गर्ने सम्झौतासहित बाप्पेलाई अनुबन्ध गरेको हो । बाप्पे आफैँ पनि रियलको समर्थक र क्रिस्टियानो रोनाल्डोको प्रशंसक हुन् ।
पोर्चुगेली रोनाल्डोलाई प्रेरणाको रुपमा लिने बाप्पेलाई उनीसँग खेल्ने चाहना थियो । रियलले उनलाई खरिद गर्न मोनाको समक्ष प्रस्ताव पनि गरेको हो । तर चाहना र दृष्टान्त भन्दा भिन्न छ आधुनिक फुटबल ।
रियल, मोनाको र बाप्पे तीनै पक्षले चाहँदा चाहँदै किन सम्भव भएन यो सरुवा ?
रियलले गत जुलाईमा मोनाकोसँग बाप्पेका लागि मौखिक सम्झौता गर्दै क्लबलाई १ सय ५० मिलियन र ३० मिलियन बोनस गरेर १ सय ८० मिलियन युरो तिर्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव गरेको थियो ।
लस एन्जेलसमा रियलका अध्यक्ष फ्लोरेन्टिनो पेरेज र मोनाकोबीच भएको सहमतिपछि दोस्रो चरणमा रियलले बाप्पेका एजेन्ट पिता वाइफ्रेड बाप्पेसँग सम्झौतामा पुग्ने प्रयास गर्यो । रियलले उनलाई ७ मिलियन युरो प्रतिवर्ष पारिश्रमिक प्रस्ताव गरेको थियो ।
त्यसबाहेक बाप्पेका पिता वाइफ्रेडले उनको छोराले नियमित पहिलो रोजाइको टोलीमा खेल्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । तर रियलले बाप्पेलाई नियमित खेल समयको ग्यारेन्टी गर्न सकेन ।
हाल पिएसजीसँग आबद्ध बाप्पेलाई फ्रान्सेली क्लबले नियमित फुटबल खेल्ने विश्वासका साथ साथै १४ मिलियन युरो प्रतिवर्ष तलब दिने भएको छ । यो तलब रियलले सर्जियो रामोस र लुका मोड्रिकलाई तिर्ने भन्दा ज्यादा हो ।
रियल सँगको सम्झौताले मोनाकोलाई मुख्य खेलाडी राइभल क्लबमा बेच्ने दबाबबाट मुक्त पार्ने थियो । तसर्थ रियल मोनाकोका लागि सहज विकल्प हुने थियो । तर रियल र बाप्पेविच सम्झौता नभेपछि अन्ततः बाप्पेको गन्तव्य पिएसजी बन्यो ।